Internship ဆင်းတဲ့အခါ Company ကြီးတွေမှာဆင်းသင့်သလား? Startup တွေမှာ ဆင်းသင့်သလား? - Intern Plus
Internship ဆင်းတဲ့အခါ ဘယ်နေရာမှာ ဆင်းရမလဲဆိုတာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် စဉ်းစားရကျပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာ intern ဆင်းတာ ကိုယ့်အတွက် ပိုကောင်းမလဲဆိုတာသိရဖို့ အောက်ကအချက်လေးတွေသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Startup မှာ Intern ဆင်းတဲ့အခါ
✅Startup business တွေမှာ Intern ဆင်းရင်
ကိုယ့်အနေနဲ့ Experience အပြည့်အဝယူလို့ရပါတယ်။ Early-stage startup တော်တော်များများမှာ Paid Employee တွေနည်းတဲ့အတွက် ကိုယ်က Tasks တွေများများစားစားတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်လို့ရပါတယ်။ Intern ဆိုပေမယ့်လည်း Full-time employee နီးနီး တာဝန်တွေယူလို့ရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ၊ တာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အများကြီးသိရှိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တာဝန်တစ်ခုတည်းယူထားရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာ၊ အားသာတဲ့အရာကို သိမြင်လာနိုင်ပါတယ်။
✅ကိုယ့်ရဲ့ Idea တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် Sharing လုပ်လို့ရပါတယ်။
Startup မှာကျ Company ကြီးတွေထက်စာရင် Flexible ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်တွေ၊ Idea တွေ၊ ပိုကောင်းမယ်ထင်တဲ့ Project တွေကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြလို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Project နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Feedback တွေကိုလည်း ပြန်တောင်းလို့ရပါသေးတယ်။
Startup မှာ ဝန်ထမ်းအားလုံးဟာ ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ် လည်ပတ်နေရပါတယ်။ အဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်နားမလည်တာတွေ မသိတာတွေရှိရင် မေးလို့ရပေမယ့် အမြဲတမ်းကြီး လူတစ်ယောက်က ဘေးမှာနေပြီးသင်ကြားပေးနေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ဘာလုပ်ပါ ဆိုပြီးတော့လည်း အမြဲတမ်းညွှန်ကြားပေးနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ့်ဘာကိုယ် Manage လုပ်ပြီး ဆောင်ရွက်တတ်ရပါမယ်။
Company ကြီးတွေမှာ Intern ဆင်းတဲ့အခါ
✅Resume ရဲ့ Work experience နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်။
Company ကြီးတွေမှာ အလုပ်သင်ဆင်းပြီးရင် ကိုယ့် Resume ရဲ့ Work experience နေရာမှာ ပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် Intern လျှောက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လျှောက်တာဖြစ်ဖြစ် Company ကြီးတွေမှာ Intern ဆင်းခဲ့ခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုအများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
Company ကြီးတွေမှာက Startup လောက် Flexible မဖြစ်ဘဲ စည်းကမ်းပိုတင်းကျပ်တာကြောင့် စည်းကမ်းကိုပိုလိုက်နာဖြစ်ပါတယ်။ Department အမျိူးမျိူးရှိတဲ့အပြင် အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ တစ်ဆင့်ချင်းစီ တင်ပြပြီး အဆင့်အလိုက် လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဲ့အတွက် Company ကြီးတွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးစနစ်တကျနဲ့ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်တတ်လာနိုင်ပါတယ်။
Company ကြီးတွေရဲ့ Environment က Competitive ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်အောင်၊ ဗဟုသုပြည့်မှီအောင်၊ သူများထက်သာအောင် အမြဲကြိုးစားနေရတာကြောင့် Improve ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Working Environment အနေနဲ့
Company ကြီးတွေမှာ အလုပ်လုပ်ရင် ဝန်ထမ်းများတဲ့အတွက် ကိုယ့် Department ကလူအချင်းချင်းပဲ သိကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Startup မှာကျ လူနည်းတဲ့အတွက် အားလုံးနဲ့ သိကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Intern မဆင်းခင်မှာ သေချာစဉ်းစားရွေးချယ်ပါ။
Company ကြီးမှာ Intern ဆင်းတာနဲ့ Startup မှာ Intern ဆင်းတာ ရရှိနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေဟာ မတူညီနိုင်တာကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင် ဘယ်မှာ Intern ဆင်းရင် ပိုကိုက်ညီမလဲ။ ဘယ်လို benefits တွေ၊ experience တွေကို ကိုယ်ကမျှော်လင့်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီး သေချာဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
“Internship ဆင်းဖို့ ဘယ်အချိန်လောက်တည်းက စတင်ပြင်ဆင်သင့်တာလဲ“ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားရင် သွားရောက်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်။